Mitohy ny zava-miafina amin'ny vokatra NFC sy Bluetooth vaovao natolotry ny FCC | Avy amin'ny mac aho
Mitohy ny zava-miafina amin'ny vokatra NFC sy Bluetooth vaovao natolotr'i Apple an'ny FCC
Fanintelony izao hatramin'ny septambra lasa teo ny Kaomisiona federaly amerikana amerikana (FCC) mahazo vaovao momba ny vokatra iray amin'ny fampandrosoana avy amin'i Apple. Ao amin'ny Avy amin'ny mac aho mamoaka izahay iray amin'ireo fifandraisana nataon'i Apple tamin'ny Vaomiera.
Ny fantatsika fa mampiaraka dia hoe a vokatra vaovao. Te hanana a habe mitovy amin'ny Apple TV 4 (ny Apple TV ankehitriny). Te hanana NFC ary Bluetooth, fa tsy Wi-Fi ary hatramin'izao dia fantatsika anarana roa ireo: A1844 sy A1846. Apple fotsiny dia tokony hampita tamin'ny komisiona ny maodely izay eo anelanelan'ny roa teo aloha, ny A1845.
Ny kinova fahatelo fantatra ora vitsy lasa izay, dia misy ifandraisany amin'ny fitsapana RF, ary koa ireo mifandraika amin'ny fihenan'ny angovo ambany Bluetooth na ny fihetsiky ny NFC Chip. Raha ny amin'ireo daty, dia natolotra ny masoivoho ny antontan-taratasy tamin'ny 25 Janoary ary ny 10 febroary dia fantatra ny pitsopitsony. Ny vaovao natolotra dia tsiambaratelo mandritra ny 180 andro. Noho izany, aorian'ny fe-potoana farany, ny toetra izay takona afenina ankehitriny, anisan'izany ny sary anatiny sy ivelany an'ny fitaovana, dia havoaka ampahibemaso. Indraindray, tsy misy fotoana hanaovana varotra azy ary noho izany, ny vokatra dia fantatra alohan'ny handehanana eny an-tsena.
Raha ny vaovao dia tsy maro ireo, satria ny antsipirian'ny vaovao navoaka mihakely sy mihakely izy io. izany dia fanahy iniana natao hitehirizana ny famolavolana sy ny fiasan'ny vokatra araka izay azo atao.
Ny vokatra dia hisarika 100 mA, misy tampon'isa 700 mA, ary eo anelanelan'ny 5,5 V sy 13,2 V. Ny fampitahana voalohany dia natao tamin'ny Apple TV, saingy ny tsy fahampian'ny herinaratra ambany dia toa nanilika azy. Ny tariby dia mitovy amin'ireo maodely telo aseho Mandrak'izao.
Toa manondro ny zava-drehetra fa fitaovana mijanona ho an'ny trano izy io. Ity daty fampisehoana ity dia amin'ity 2017 ity ihany, satria amin'ny daty vitsivitsy ny data momba ny fitaovana, mandraka ankehitriny dia miafina, dia havoaka ampahibemaso, izay hanery ny fampisehoana ny vokatra amin'ny besinimaro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Mitohy ny zava-miafina amin'ny vokatra NFC sy Bluetooth vaovao natolotr'i Apple an'ny FCC
Apple Music dia nihoatra ny 20 tapitrisa ny mpamaky, saingy tsy faly ilay orinasa
Ny banky aostralianina dia manova ny paikadin'i Apple Pay